प्रचण्डको अभिव्यक्तिले मधेशमा खैलाबैला – TajaNepal
Home /Blog/प्रचण्डको अभिव्यक्तिले मधेशमा खैलाबैला
समाचारOctober 25, 2018
प्रचण्डको अभिव्यक्तिले मधेशमा खैलाबैला
काठमाडौं । राजपा नेपालका उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले जनकपुरमा गएर प्रदेश सरकारलाई ‘ओभरटेक’ नगर्न दिएको निर्देशनलाई धम्कीको संज्ञा दिएका छन् । उनले भने,‘प्रचण्डको भनाईलाई हामीले गम्भिर रुपमा लिएका छौं । यो प्रचण्डको हामीलाई धम्की हो । उहाँले सल्लाह वा सुझाव दिनुभएको होईन् ।’
उनले भने,‘प्रचण्डले आफू सत्तामा जाने दाउमा संघ र प्रदेशबीच द्वन्द्व चर्काउने रणनीति लिएका छन् । यो सरकार बदनाम होस् भन्ने उनको चाल छ । अनि मेरो पालो आउँछ भन्ने प्रचण्डले सोचेका छन् ।’
उनले मुलुकमा अराजकताको स्थिति आयो भने यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी संघीय सरकारको हुने समेत बताए। प्रचण्डले जनकपुरको त्यही सभामा आफू मधेशी जनताको मागप्रति गम्भिर रहेको तर वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरेर बस्नेहरु नभएको भन्ने अभिव्यक्ति दिएको पनि उनले सुनाए । उनले भने,‘द्वन्द्व चर्काउने प्रचण्डको रणनीति हो । त्यही अनुसार उनले जनकपुरमा ओभरटेक नगर्न भनेर धम्की दिएका हुन् ।’
लालले यथाशक्य चाँडो अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक डाक्न समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेका छन् । उनले भने,‘अहिलेसम्म अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक भएको छैन । प्रधानमन्त्रीजी यसमा चुक्नुभयो । अब विलम्ब नगरी बोलाउनुपर्छ ।’
उनले संघीय सरकारले मुलुकमा अराजकताको स्थिति सिर्जना गर्न खोजेको पनि आरोप लगाए । उनले भने,‘संघीय सरकार शासन गर्न चाहन्छ । सबै संविधानबमोजिम चल्नुपर्छ । २ नम्बर प्रदेश संविधानबमोजिम नै चलेको छ ।’
२ नम्बर प्रदेशले पारित गरेको प्रहरी ऐनमा त्यस्तो विरोध गर्नुपर्ने के कुरा छ भन्दै उनले प्रश्न समेत तेर्साए । उनले भने,‘२ नम्बर प्रदेशले पारित गरेको प्रहरी ऐनमा के छ ? संविधान विरोधी के कुरा छ ?’ उनले अहिलेपनि संघीय प्रहरी ऐन दराजभित्र बन्द गरेर राखिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले भने,‘सबैले संविधानबमोजिम अभ्यास गर्नुपर्छ ।’
बरिष्ठ कानुनविद टिकाराम भट्टराईले २ नम्बर प्रदेश सभाले पारित गरेको प्रहरी ऐन प्रदेश प्रमुखले तत्काल प्रमाणीकरण नगरी पूनर्विचारको लागि फिर्ता पठाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनले भने,‘अहिले २ नम्बर प्रदेश र संघबीच देखिएको समस्याको समाधान गर्नको लागि प्रदेश प्रमुखले उक्त ऐन प्रमाणीकरण गर्नुहुँदैन् । एकपटक पूनर्विचारको लागि फर्काउनुपर्छ । यसप्रति म उहाँको ध्यानाकार्षण गराउन चाहन्छु ।’
संविधानको अनुसुची ६ मा प्रदेश प्रहरीको परिकल्पना गरिएको सुनाउँदै उनले भने,‘प्रदेशलाई कहिल्यैपनि प्रहरी ऐन जारी गर्ने अधिकार छैन भन्न खोजिएको होईन् । प्रहरी ऐन जारी गर्ने अधिकार संविधानले प्रदेश सभालाई दिएको छ। संविधानको धारा ५७ को उपधारा ६ मा प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ, यो स्थानीय, प्रदेश सभाले बनाएको कानुन संघीय कानुनसँग बाझियो भने ती कानुनहरु स्वतः अमान्य हुन्छन् भनेर भनेको हुँदा अहिले संघीय प्रहरी ऐन जारी भई नसकेको अवस्थामा एकैचोटी प्रदेश प्रहरी ऐन जारी गर्दा अहिले एउटा अन्यौलता आएको छ ।’
२ नम्बर प्रदेशले पारित गरेको प्रहरी ऐन औचित्यहिन रहेको पनि उनले आरोप लगाए । उनले थपे,‘यो ऐनको कुनै सार्थकता छैन । प्रदेश सभाले जुन अहिले प्रहरी ऐन जारी गरेको छ । यो देखिदेखी संघीय सरकारसँग निहुँ खोज्न खोजेको देखिन्छ । किनभने त्यो ऐन हामीले अनौपचारिक रुपमा हेर्यौं, प्रहरी महानिरिक्षकसम्मको नियुक्ती, सरुवा, बढुवा प्रदेश सरकारले गर्ने गरिकन त्यो ऐन पास भएको छ । संघीय कानुनबमोजिम मुलुकमा एउटा प्रहरी महानिरिक्षक हुन्छ । अब, प्रदेशमै प्रहरी महानिरिक्षक हुन्छ भनेर ऐन पास भएपछि सिधै केन्द्रसँग टक्कर गर्न खोजेको देखिन्छ । केन्द्रसँग मनोमालिना गर्न खोजेको देखिन्छ । प्रदेश नम्बर २ को सरकार र प्रदेश सभाले संविधानको सिमा र लक्ष्मण रेखा उल्लंघन गरेको छ ।’
संविधानको अनुसुचि ६ ले प्रदेशलाई २१ वटा अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै उनले भने,‘ती २१ वटामध्ये अरु कानून चाहीँ नबनाउनुपर्ने, अनि लोकसेवा नै नबनाईकन प्रहरी ऐन पहिला बनाउनुपर्नेको यो रहस्य बुझ्न सकिएको छैन् । यो रहस्यमय छ । यसले द्वन्द्वको सिर्जना गर्छ ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम प्रदेश नम्बर ७ का प्रदेश सभा सदस्य भरत बहादुर खड्काले प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अधिकार दिन कञ्जुस्याँई गरेको आरोप लगाए । उनले भने,‘अहिले झगडा गर्ने बेला होईन । संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्छ । कञ्जुस्याँई गर्नुहुँदैन् ।’
प्रदेश अहिले पनि प्रभावहिन रहेको उनको गुनासो छ । उनले भने,‘७ नम्बर प्रदेशमा हामीले २ पटकसम्म बजेट ल्याईसक्यौं । तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन् । बजेट कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र नै छैनन् । त्यतातिर संघीय सरकारले ध्यान दिनुपर्यो ।’ प्रदेशप्रति जनताको अहिले वितृष्णा बढेको उनको भनाई थियो ।
उनले अहिलेपनि मुलुक संक्रमणकै अवस्थामा रहेको बताए । उनले भने,‘यस्तो अवस्थामा तीनै तहबीच सहकार्य, समन्वय र एकता हुनुपर्छ । अहिले झगडा गर्ने बेला होईन् । तर, केन्द्रिय सरकारको नेतृत्वकर्ताले अहिले पनि निरंकुश सोच राख्नुभएको छ । यही तरिकाले गयो भने ठूलो दुर्घट्ना हुन्छ ।’ उनले संघीय मोडेल फेल खायो भने मुलुक फेल खाने बताए ।
प्रधानमन्त्री आफूहरुको पनि अभिभावक भएको बताउँदै उनले प्रधानमन्त्री ओलीले बोल्ने भाषा र बोली चित्तबुझ्दो नभएको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘कहिले अरिंगाल भनेको छ, कहिले के भनेको छ ? सत्ताको धम्कीको भरमा सरकार चल्दैन् । दुई तिहाईको बहुमतको दम्भको बलमा सरकार चल्दैन् । संविधानको सफल कार्यान्वयनको विकल्प छैन् । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानुन तथा ऐनहरु बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’